Factory Formwork, mpamatsy - Mpanamboatra Formwork China
1.Product Fampidirana ny anarana feno 63 Steel Frame Formwork System dia 63 Steel Frame Plywood Build-up Formwork System, avo ny hamafiny ary malama ny velarana, azo namboarina sy nopotehina tanteraka na niavaka 2.Retsy momba ny vokatra 1.tafatotra: 63mm tontonana vita amin'ny tabilao: 12mm 2. lanjany: 30kg / m2. 3. Fitsaboana ambonin'ny tany: fandefasana loko 4.laverina: in-50 eo ho eo 6.Model Number: LWSF1063 7.Material: Steel Q235 3.Product Features 1.Cost save 1) simple assemble, set up and r ...
1.Product Fampidirana: Luowen vaovao 63.5 Steel Frame Formwork System dia mazàna indrindra vita amin'ny vy vy, tontonana plywood, scaffold bracket, coupler, onitra waler, fatotra tsorakazo, manandratra faribolana, vy clamp sy misintona-manosika prop, sns ny tsanganana formwork azo angonina mialoha amin'ny tany na ialana amin'ny toerana fananganana sarotra. Ampiasao ny fitaovana hametrahana azy eo amin'ny tranokala fananganana ary arotsaho ny beton-tsanganana. Rehefa esorina ny formwork aorian'ny fikojakojana azy dia tsy ilaina ny mamono tanteraka ...
Fitarihan-kevitra: Malaza kokoa ny famolavolana aliminioma noho ny lanjany maivana sy ny tanjaka tsara. Mila fanohanana sy fatorana vitsy kokoa izany. Ny singa ao amin'ny rafi-pandrafetana vita amin'ny aliminioma dia misy ny rindrina, tsanganana, andry, takelaka, maodely ary zana-kazo. Ny buckles pin dia natokana dia ampiasaina hampifandraisana ireo modely. Ny rafi-modely dia azo ravana amin'ny dingana voalohany. Ny haben'ny famaritana mahazatra ny môdely rindrina dia 100mm-450mm X 1800mm-2400mm. Ny haben'ny famaritana mahazatra ny maodelin'ny tafo dia 600 ...
Anarana: Sarimihetsika vita amin'ny gitara miatrika horonantsary: ​​1220x2440mm, 1250x2500mm sns Hatevina: 12/15 / 18mm ETC Core: Poplar, Eucalyptus, hardwood, combi Glue: MR, MELAMINE, WBP Fampiasana: Fanamboarana, fonosana Fonosana ivelany: paleta na carton Formwork / shutering dia karazana fampiasana plywood. Ny plywood formwork dia azo antsoina koa hoe Shuttering Plywood. Sarimihetsika vita amin'ny tabilao miatrika horonantsary / MDO miatrika plywood / Wood veneer face plywood no azo ampiasaina ho Form Work. Ny lakaoly ho an'ny plywood Formwork dia lakaoly WBP. Fa raha mila toekarena ...
Jack screw azo ovaina, Sifotra amin'ny fantsom-by vy, Kwikstage Fitaovana fikolokoloana, Fizaran-tsarimihetsika Ringlock, Fehikibo Scaffolding Ringlock, Scaffold Ringlock adidy mavesatra,